दूध र दहिमा कुन राम्रो हो स्वास्थका लागि ? एकपटक पुरै प’ढ्नुस : – Sadhaiko Khabar
दूध र दहिमा कुन राम्रो हो स्वास्थका लागि ? एकपटक पुरै प’ढ्नुस :
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ समय: ७:२७:३९
एजेन्सी / दूध र दही सजिलै जहाँ पनि पाइने खानेकुरा हुन् । यी दुवैको से’वन स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । तर दूधभन्दा दही खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ।
एक दिनमा २५० मिलि दही खानु सही हुन्छ । दिउँसो भोजनको समयमा दही पिउनुभयो भने तपाईंलाई फाइदा हुन्छ । तर यसको मात्रा तपाईंले खाने अन्य कुराको हदले निर्धारण गर्ने हो ।
राति कहिल्यैपनि दही खानु हुँदैन । मासु खानुभएको छ त बिर्सेर पनि दूध वा दही नखानुहोला । अनि बासी दही कदापि नखानुस् । मधुमेह भएकाहरूले दही नखाएकै राम्रो । रुघाखोकी, टन्सिल, दम र सास फेर्न स’मस्या भएकाहरूले दही खानै हुँदैन ।
४८ घण्टामा नै क्या’न्सर ठीक पार्ने यस्ताे चामत्कारिक औषधि,यस्ताे छ प्रयाेग गर्ने तरिका :
एजेन्सी / क्यान्सरका वि’रामीमाथि २५ वर्ष लामो सोधपछि क्यालिफोर्निया युनिवर्सिटीको मेडिकल फिजिक्स एवं साइकोलोजीका सिनियर प्रोफेसर डा. हर्डिन बी जन्सले भनेका छन्– ‘क्या’न्सरको उप’चारका क्रममा प्रयोग गरिने किमोथेरापीले क्या’न्सर पी’डित वि’रामीलाई दर्द’नाक मृ- त्यु तर्फ धके’ल्न सक्छ तर, क्यान्सरलाई केही घण्टामै ठिक पार्ने थुप्रै औषधिहरु छन् । जस्तै:-
२) अंगुरको विउको धुलो (सत्व): हालै भएको एक शोधमा यो कुरा प्रमाणित भएको छ कि अंगुरको विउको धुलो अर्थात सत्व अर्क ल्यूकेमिया र अन्य प्रकारका क्यान्सर ठिक पार्न निकै उपयोगी पाइएको छ । र छोटो समयमै क्या’न्सर ठिक पार्न मद्दत गर्छ ।
शोधमा यो कुरा पनि प्रामाणित भइसकेको छ कि अंगुरको विउले मात्र ४८ घण्टामा हरेक किसिमका क्यान्स’रलाई ७६ प्रतिशतसम्म विकिर्ण अर्थात ठिक गर्नमा सक्षम छ ।
जर्जियाको विनशिप क्यान्सर इन्सिच्युट र एमोरी युनिवर्सिटीद्धारा २००० मानिसमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । जसमा वैज्ञानिकहरुले पारिटिन पाए । जो एन्टी–क्यान्सर अर्थात क्या’न्सरविरुद्धको ड्र- ग (औषधि)का रुपमा चिनिन्छ । सोधमा मुसाहरुमाथि ११ दिनसम्म पारिटिनको प्रयोग गर्दा यो फोक्सोको क्यान्स’रका लागि उपयोगी औषधि हो भन्ने प्रमाणित भएको थियो ।
यसका साथै यसले ब्रे’न अर्थात म’स्तिष्क र गलाको ट्युमरलाई पनि ठिक पार्न सक्छ । सोधकर्ता टिम भन्छ– यो पौधा (जसलाई एक प्रकारको फल पनि भन्छन्) को आधारमा क्या’न्सर ठिक पार्नका लागि नयाँ औषधि बनाउनमा सहयोग मिल्नेछ ।
यसको परिणाम किमोथेरापी जस्तै अर्काे वर्ष आउनेछ । विशेषज्ञ भन्छन्- पारिटिनको प्रयोग कि-टाणु रोक्नका लागि प्रयोग गरिसकिएको छ तर, औषधिका रुपमा यसको प्रयोग यसै अध्ययनपछि गरिनेछ ।
सोधमा खटिएका एक जना प्रोफेसर चेन भन्छन्- क्यान्सरलाई ६पीजीडी स्तरमा एक्टिभ गर्नका लागि रुबर्बका प्रयोग गरिनु क्यान्सरलाई ठिक पार्नका लागि जरुरी छ । यसको प्रयोगबाट क्या’न्सर ६पीजीडी स्तरमा तीव्र गतिमा बढ्नेछ जसले क्या’न्सर चाँडै निको हुनेछ । (यो शोध जर्नल नेचर सेल बायोलोजीमा प्रकाशित भएको छ हामीले साभार गरेका हौँ ।